ကွန်ပျူတာကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လို ISTARTSURF - WINDOWS ကို - 2019
Istartsurf.com - အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပရိုဂရမ်ကို Google Chrome, Mozilla Firefox ကို, Opera နဲ့ Internet Explorer ကိုရန် "ဗိုင်းရပ်စ်" ဘာသာရပ်နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသုံးပြုသူ browser များ။ ရလဒ်အနေနဲ့ browser ကို home page ကိုပြောင်းလဲ, သင် istartsurf.com ဒါလွယ်ကူသောမဖယ်ရှားပစ်ရ, ကြော်ငြာနှင့်အခြားအရာအားလုံးချွတ် palmed ။
ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာလုံးဝသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ istartsurf ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပင်မစာမျက်နှာကိုပြန်သွားဖို့သင်မည်သို့ပြပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါထား၏မူလအစပြောပြနှင့်မည်သို့ istartsurf က Windows ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်အတူမည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။
မှတ်ချက်: ဤလက်စွဲစာအုပ်၏အဆုံးရန်ပိုမိုနီးစပ်သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယို format နဲ့သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိရန်ပိုနှစ်သက်ပါလျှင်ဖယ်ရှားပစ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲအတွက်စောင့်ရှောက် istartsurf ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုညွှန်ကြားချက်ရှိသည်။
Windows7iStartSurf, 8.1, နဲ့ Windows 10 ကိုဖယ်ရှားခြင်း
ကွန်ပျူတာကနေ istartsurf ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပထမဦးဆုံးကျွန်တော် Windows ကိုဖျက်လိမ့်မည်, မခွဲခြားဘဲသင်ဤ malware ၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရဖို့လိုအပ်သည့်ဘရောက်ဇာ၏တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်။
အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ - ပထမခြေလှမ်း, Control Panel ကိုသွားပါ။ ဖယ်ရှားရန် istartsurf installation ပရိုဂရမ်များ၏စာရင်းအောက်ကိုဆင်း (အဲဒါကိုကွဲပြားခြားနားဟုခေါ်တွင်ကြောင်းဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်အိုင်ကွန်ပုံရိပ်မှာအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်) ။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့် "(Edit ကို) ကိုဖျက်ပစ်ရန်" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦးက window ကို istartsurf (ငါကနားလည်အဖြစ်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြုပြင်မွမ်းမံနေသည်, သင်အဆင်းကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါ) ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေဖယ်ရှားပစ်ဖွင့်လှစ်။ က istartsurf ဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်ကြိုးစားမှုခုခံတွန်းလှန်ရန်၎င်း၏အစွမ်းကုန်ပြုလိမ့်မည်: ကပ်တ်ချာရိုက်ထည့်ပါက (စအင်္ဂလိပ်) (ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှု), display ကိုအထူးရှုပ်ထွေး interface ကိုမှန်ကန်စွာဝင်ပေမယ့်အသေးစိတ် Uninstall အအသုံးပြုခြင်း၏အသီးအသီးခြေလှမ်းကိုပြသနေသောကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းအစီရင်ခံရန်ပူဇော်ရန်။
ကပ်တ်ချာ (သင်ပုံထဲမှာမြင်သောဇာတ်ကောင်) ရိုက်ထည့်ပါ။ ငါကနောက်တဖန်မဖျက်ပစ်စတင်ပါခဲ့သည့်ကနဦးစတင်ကာလအတွင်းအလုပ်မဖြစ်ဘူးရှိသည်။
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်တိုးတက်မှု bar ထဲကနေလိုအပ်တဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အဆုံးရောက်ရှိသည့်အခါ, (ဆက်လက်) Continue link တစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
လာမယ့် screen ကိုကလစ်နှိပ် "ပြုပြင်ခြင်း" တွင်, နောက်တဖန် Continue ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖယ်ရှားပစ်ရန်အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကို Check, "Continue" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနှင့် "Ok" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျ (အစသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မျက်မြင်မရတဲ့နည်းနဲ့ installed သော) သတိပေးချက်တစ်ခုရှာရန်ကာကွယ်ပါမြင်ရပါလိမ့်မည်သောနောက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တကွ, သိပ်ဖယ်ရှားရမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပါရှာရန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့လက်စွဲစာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, ဒါပေမယ့်အလုံအလောက်အဆိုပါ Program Files သို့မဟုတ် Program Files (x86) ကိုသွားအများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဖိုင်တွဲဘယ်မှာ MiuiTab သို့မဟုတ် XTab ရှာဖွေပါကအတွင်းရှိ uninstall.exe file ကို run ။ နေကြသည်
သငျသညျ, istartsurf.com ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်သာအသုံးပြုမှုကို Windows အစီအစဉ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆက်လက်နေဆဲ start တဲ့အခါမှာသင့် browser မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး: ကိုလည်း Registry ကိုကနေနှင့် browser ကို shortcuts တွေကိုကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်: အစမှာပရိုဂရမ်များစာရင်းတစ်ခုနှင့်အတူပုံရိပ်မှာ, browser ကိုထက်အခြားတခြားဆော့ဗ်ဝဲအာရုံစိုက်။ ဒါဟာအစ istartsurf ရောဂါကူးစက်နေစဉ်အတွင်း, ငါ့ပညာအတတ်မရှိဘဲတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သင့်အမှု၌အလားတူမလိုလားအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သဘာဝကျပါတယ်။
registry ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ istartsurf
Windows ကို registry ကိုအတွက် istartsurf သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်, ပြေး box ထဲမှာဦးဝင်း + R ကိုနှင့်အမျိုးအစား regedit လို့နှိပ်ခြင်းဖြင့် Registry Editor ကိုစတင်ပါ။
Registry Editor ကို, မီးမောင်းထိုးပြ "ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်" ၏လက်ဝဲ pane ထဲကကို, ထို့နောက်မီနူးဖို့ "Edit ကို" သွားပါ - "။ Next ကိုရှာပါ" "ရှာပါ" နှင့် istartsurf ရိုက်ထည့်ပါ, ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ခေါင်းစဉ်အတွက် istartsurf င်တစ်ဦး registry key ကို (လက်ဝဲဖိုင်တွဲ) ရှိလျှင်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ဖျက်ပစ်ပါ။ " ထို့နောက် "Edit" menu ကို, (သို့မဟုတ် F3 သော့ချက်) "Next ကိုရှာပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦး registry ကိုတန်ဖိုး (ညာဘက်အပေါ်စာရင်းထဲတွင်) ရှိလျှင်, ထိုကဲ့သို့တန်ဖိုးပေါ်တွင်နှိပ်ပါ, right-click လုပ်ပြီး, "ပြောင်းလဲခြင်း" နှင့်တစ်ဦးလုံးဝစင်ကြယ်သော "Value ကို" လယ်ပြင်ကို select, ဒါမှမဟုတ်သင်သည်အဘယ်အရာကိုပုံမှန်စာမျက်နှာနဲ့ Search စာမျက်နှာမေးခွန်းထုတ်ကြပြီမဟုတ်မှန်လျှင်, အဆိုပါစာမျက်နှာကို default လိပ်စာနှင့် default အနေနဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှသက်ဆိုင်ရာနံပါတ်ရိုက်ထည့်။ startup စပ်လျဉ်းပစ္စည်းများကို၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ။ F3 သို့မဟုတ် Menu "Edit ကို" ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေရေး Continue - "Next ကိုရှာပါ" ။
သင်ရှာတွေ့ကို item (သို့မဟုတ်အမှတ်အထက်တွင်ဖော်ပြထားဘာ - ခက်ခဲ) နဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာမသိကြပါလျှင်, ကိုယ့်ကြောင့် delete, လေးနက်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့က Windows registry ကို istartsurf်left အချည်းနှီးဖြစ်၏တိုင်အောင်ဖျော်ဖြေဖို့ဆက်လက် - ပြီးရင် Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
browser ကို shortcuts တွေကိုထံမှဖယ်ရှားရေး
အခြားအမှုအရာတို့ကိုများထဲတွင် istartsurf သည့်တံဆိပ်များ browser များအတွက် "သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်" ပေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မြင်တွေ့ရပုံကိုကြည့်ပါရန်, browser ၏ဖြတ်လမ်းပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Properties ကို။ "
အစား executable file ကို browser ကိုမှလမ်းကြောင်းများလာတဲ့အခါမှာ "အရာဝတ္ထု" သင်စာမျက်နှာ၏ istartsurf လိပ်စာ်မှန်ကန်သောဖိုင်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, သင်သည်လက်ျာလမ်းစဉ်ကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်, အလင်းနို့နှင့်အတူမည်သည့်ဖိုင်ကိုရယူသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ (- တစ်ဖြတ်လမ်းဖန်တီး, အဲဒီနောက် browser ကိုလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ဖို့, ဥပမာအားဖြင့် Desktop ပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီးမောက်) ရိုးရိုး re-ဖန်တီးနေတဲ့ဘရောက်ဇာကိုဖြတ်လမ်း - သူကတောင်ပိုပြီးလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။
စံ layout ကိုဘုံ browser များ:
Google Chrome က - Program Files (x86) Google က Chrome ကို Application ကို Chrome.exe
Mozilla Firefox ရဲ့ - Program Files (x86) Mozilla Firefox ကို firefox.exe
အော်ပရာ - အော်ပရာ launcher.exe Program Files (x86)
က Internet Explorer - Program Files Internet Explorer ကို iexplore.exe
Yandex Browser ကို - exe file ကို
လုံးဝ istartsurf ဖယ်ရှားပစ်ရန်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်, - ကို browser ရဲ့ settings ကိုသွားပါကလိုအပ်သင်တို့အပေါ်မှာပင်မစာမျက်နှာနှင့် default အနေနဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရဲ့ပြောင်းပေးပါ။ ဒီဖျက်မှုမှာနီးပါးပြည့်စုံစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ငါသည်အမြင့်မားတစ်ဦး AdwCleaner သို့မဟုတ် Malwarebytes Antimalware (စင်တီမီတာ။ ထိပ်တန်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖယ်ရှားရေး Tool ကို) အဖြစ်ကွန်ပျူတာထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖယ်ရှားရေး Tool ကိုထွက်စစ်ဆေးနေအကြံပြု istartsurf ဖယ်ရှားရေး၏ပြီးစီးမှာ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဤမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးတည်း လာ. , နေဆဲ (ထိုကဲ့သို့သောကျနော်တို့ကိုကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာ Task Scheduler, ကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့အမှတ်စွန့်ခွာ, ဤအစီအစဉ်များကိုလုံးဝသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရကိုကူညီနိုငျပါဘူး။
ဗီဒီယိုကို - ဘယ်လိုကွန်ပျူတာဖယ်ရှားပစ်ရန် istartsurf
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ငါသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေဒီ malware ကိုဖယ်ရှားမယ် browser ကို home page ကိုပြန်သွားပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းလက်ရှိဖြစ်စေခြင်းငှါအခြားအမှုအရာတို့ကိုမှသင်၏ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ပြသသောဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြေညာချက်, မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
ကွန်ပျူတာ istartsurf ပါဘူးဘယ်မှာ
အားလုံးထိုကဲ့သို့သောမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များကဲ့သို့ပင်သင်လိုအပ်သောအခြားအစီအစဉ်များနှင့်အတူနှငျ့သငျမဆိုက်ဘ်ဆိုက်များကနေအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ကြောင်း installed istartsurf ။
ဒါကြောင့်ရှောင်ရှားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေ software ကို install လုပ်များနှင့်ဂရုတစိုက်သင်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ရေးသား, သင် install လုပ်ဖို့မသွားခဲ့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့မိလျှင်, ငြင်းဆန်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖတ်ပါ, အ Skip သို့မဟုတ်ငြင်းဆိုရန်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် uncheck လုပ်ပါ။
ဒါဟာသင်သူတို့ဟာကွန်ပျူတာထဲမှာ install မီသတိပေးခဲ့သည်ခံရဖို့ရွေးချယ်စရာရှိသည်ဒီတော့အရှိဆုံးသောအရာတို့ကို, ထိုအရပ်၌ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ် istartsurf ဆင်တူ, ရှိသမျှဒေါင်းလုတ်လုပ်အစီအစဉ်များ VirusTotal.com စစ်ဆေးဖို့လည်းကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။